एयरपोर्टमा डा. सिके राउतको आफ्नै फोर्स सुरक्षा दिदै !
डा. राउत करिब ३:३० सम्म जनकपुर विमानस्थल आईपुग्ने उनका एक समर्थकले जानकारी दिए ।
२६ फाल्गुण, २०७५ || प्रकाशित १५:२२:००
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि प्रथम पटक जनकपुर आउन लागेका डा. सिके राउतलाई उनको आफनै फोर्सले सुरक्षा दिएका छन् ।
सरकारी सुरक्षा जस्तै डा. राउतलाई सुरक्षाकर्मी शैलीमा उनको समर्थकहरुले उनलाई सुरक्षा दिनको लागि जनकपुर विमानस्थलमा तैनाथ भएका छन् । दर्जनौको सँख्यामा रहेका उनका युथ फोर्सले उनलाई सुरक्षा चुनौति रहेको भन्दै प्रहरीझै सुरक्षा कडा पारेका छन् । विना हातहतियारकै अहिँसा भावनाले उनलाई सुरक्षा दिएका हुन् ।
डा. सिके राउत जनकपुर आउने भएपछि उनका समर्थकहरु भारी मात्रामा जनकपुर विमानस्थल पुगेका छन् । शुक्रबार मात्र नेपाल सरकारसँग ११ बुँदे सहमती गरेका डा। राउत विहान १२ बजे नै जनकपुर आईपुग्ने भनेपनि उनको आउने कार्यक्रम भने कसैलाई थाहा नभएको तथा भएपनि नतोकिने गरेको बताइएको छ । विहान ११ बजेदेखि नै डा. राउतलाई स्वागत गर्नको लागि आतुर उनका कार्यकर्ता एवम् समर्थकहरु घण्टौदेखि प्रतिक्षामै विमानस्थलमा बसेका छन् ।